VAIA1200 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၂၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA1200
As an updated product of the most modern water filtration technology in 2018, 1200LPH VAIA1200 Purified Water Filtration System uses an automatic stainless steel filter column with the ability to filter out pure water from water sources that do not meet standards
၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ ခေတ်နဲ့ညီတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်တာနဲ့အညီ 1200LPH VAIA1200 ရေစစ်က အဆင့်မမီတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်တွေကို ရေသန့်သို့ ပြောင်းပေးတဲ့ အော်တို စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လံကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
When using the VAIA1200 filter system, you will haveapure water source that meets the standards of the Ministry of Health QCVN 6-1:2010/BYTto serve the needs of food and production and business. With just over 9900 USD you can own the # 1 quality water purifier on the market withadurability of up to 15 years.
VAIA1200 ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT နဲ့ ကိုက်ညီပြီး အစားအသောက်ထုတ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၉၀၀ တည်းနဲ့ ၁၅ နှစ်ထိ ခံတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ရေစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Products are imported and distributed exclusively by Viet An General Trading Joint Stock Company in Vietnam. With nearly 20 years of building and growing, always building the brand with quality and trust, you should be sure to use our exported VAIA1200 1200 liter pure water filtration systems you will feel satisfied. heart.
Here are detailed information of products specializing in 1200LPH VAIA1200 Purified Water Filtration System.
ဒီပစ္စည်းကို ဗီယက်နမ်မှာ Viet An ကုမ္ပဏီကနေ တင်သွင်းဖြန့်ချီတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ် ၂၀ နီးပါး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VAIA1200 ရေစစ်ကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် သင်စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရနိုင်မှာပါ။ အောက်တွင် 1200LPH VAIA1200 ရေစစ်အကြောင်းကို သေချာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Introduction of 1200LPH VAIA1200 Purified Water Filtration System by Viet An
Viet An မှ 1200LPH VAIA1200 ရေစစ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်း
Specially designed products to treat water, filter water, turn non-standard water into clean water to ensure hygiene.
ရေကိုပြုပြင်ရန်၊ ရေစစ်ရန်၊ ညစ်ညမ်းသော ရေများကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ရေသန့်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
With the most modern application of RO water filtration technology today, it can remove up to 99.9% of impurities, toxins, viruses, bacteria ... both in water sources to bring standard water sources. QCVN 6-1:2010/BYT of the Ministry of Health and FDA standards of the United States.
ယနေ့ခေတ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး RO ရေစစ်နည်းပညာဖြင့် ရေမှ ၉၉.၉%သော အညစ်အကြေးများ၊ အဆိပ်အတောက်များ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနှင့် US ရဲ့ FDA စံနှုန်းနဲ့ ညီစေပါတယ်။
The main components that make up the 1200LPH VAIA1200 Purified Water Filtration System are all manufactured by American, British, Dutch, Korean technology ... and assembled at Vietnam's largest factory in Vietnam at Phu Huu hamlet, Thanh Lam village, Me Linh dist, Hanoi, Vietnam with an area of more than 15,000 m2. Every year, Viet An can supply to the market thousands of industrial water purification systems with many different capacities from 150 liters/h, 300 liters/h, 400 liters/h, 1000 liters/h ... to 70,000 liter/h for domestic and international markets. If you want to own this 1200LPH VAIA1200 Purified Water Filtration System, you can go to Viet An's branches in Hanoi - Ho Chi Minh - Hue - Da Nang - Buon Ma Thuot to experience the product directly, private question is free. In addition, VAIA1200 is alsoastandard product for export and is trusted by many customers in ASEAN countries.
ဒီစက်မှာ ပါဝင်တဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေကို အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ဒတ်ခ်ျစတဲ့ နိုင်ငံတွေက နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပြီး Lot 43 D1 လမ်း H2-G2 Quang Minh စက်မှုဇုန်၊Me Linh, Hanoi မြို့မှာရှိတဲ့ ဧရိယာ ၁၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး စက်ရုံကြီးမှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Viet An မှ နှစ်စဉ် တစ်နာရီမှာ ၁၅၀ လီတာ၊ ၃၀၀လီတာ၊ ၄၀၀ လီတာ၊၁၀၀၀၀ လီတာမှ ၇၀၀၀၀ လီတာအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမတူညီတဲ့ ရေစစ် ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဈေးကွက်သို့ ပေးပို့နေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီ 1200LPH VAIA1200 ရေစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် Ho Chi Minh - Hue - Da Nang - Buon Ma Thuot မှာ ရှိတဲ့ ရုံးခွဲတွေဆီကို သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် VAIA 1200 စက်က တင်ပို့ဖို့ အဆင့်မီပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုလည်း ရရှိထားပါတယ်။
1200LPH VAIA1200 Purified Water Filtration System - the most modern water purification technology of the United States
1200LPH VAIA1200 ရေစစ်- US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားသော ရေစစ်
Like other industrial water filtration systems with capacity that Viet An offers to the market, model VAIA1200 corresponding toacapacity of 1200 liters per hour hasacompletely self-contained, automatic water filtration process. During the operation without the participation of people, the system will automatically pump, automatically disconnect the water, automatically rinse the filter column after3days of use, thus ensuring the quality of finished water. pure drinking water standards. This is what differentiates the use of automatic valves from mechanical valves. Although the investment cost to buy an autovalve filter system is higher than that of the mechanical valve series, many people still choose to buy this filter.
အခြားစနစ်တွေလိုပဲ တစ်နာရီမှာ ၁၂၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဒီ VAIA1200 စက်ကလည်း ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ လူမပါဘဲနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ တလျှောက်မှာလည်း စနစ်က အော်တိုစုပ်တင်တယ်။ အော်တို ရပ်တယ်။ သုံးပြီး ၃ ရက်ကြာတဲ့အခါ ရေစစ်ကော်လံကို အော်တိုဆေးတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ထုတ်ပြီးသားရေက ရေသန့်စံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ဒါက အော်တိုအဆို့နဲ့ စက်သုံးအဆို့ရဲ့ ခြားနားချက်ပါပဲ။ အော်တိုအဆို့ကို အသုံးပြုထားတဲ့ ရေစစ်က ဈေးပိုများတယ်ဆိုပေမယ့် လူတွေကတော့ အော်တိုအဆို့ကိုပဲ ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Pumping system, filter cup, filter column, filter, bracket ... are made of high quality 304 stainless steel, not corroded by oxidation, suitable for humid tropical climate conditions in our country in addition to this 304 stainless steel material also helps the filter system to haveamuch longer lifespan than other filter systems using other composite filter columns. The shiny surface, high aesthetics, and easy cleaning has also become the consumer attraction of the VAIA1200 stainless steel autovalve column.
ရေစုပ်တင်ခြင်းစနစ်၊ ရေစစ်ခွက်၊ ရေစစ်ကော်လံ၊ ရေစစ်ခြင်း စတာတွေကို သံချေးတက်ခြင်းမရှိဘဲ စိုစွတ်သော ရာသီဥတုအတွက်ပါ သင့်တော်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် 304 စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စတိန်းလက်စ်စတီးက ရေစစ်ကို အခြား ပေါင်းစပ်ကော်လံတွေကို သုံးထားတဲ့ ရေစစ်ထက် ပိုပြီး ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။ တောက်ပသော မျက်နှာပြင်ဟာ လှပပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာလည်း လွယ်ကူသောကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေက အလွန်ပဲ ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။
In addition, this is also considered the most intelligent water filtration system withacontrol system capable of automatically disconnecting when something goes wrong, so it is absolutely safe to use.
ထို့အပြင် တစ်စုံတစ်ရာ ပြသနာပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင် လုပ်ဆောင်မှု အော်တိုရပ်သွားတဲ့ ထိန်းချုပ်စနစ် ပါဝင်တာကြောင့် ဒီစက်ဟာ အကောင်းဆုံး ရေစစ်စနစ် ဖြစ်သလို အသုံးပြုရတာလည်း လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။
All the above advantages have createdastrong attraction that makes the pure ro water filtration system 1200 liters/h using Viet An's inox autovalve filter column dominate the market, win the trust of customers. and is always the first choice of all customers at home and abroad today.
အပေါ်က ကောင်းကျိုးတွေက ဝယ်ယူသူတွေကို တစ်နာရီမှာ ၁၂၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဒီစက်ကို အသုံးပြုဖို့ ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီစက်ကို ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ဝယ်ယူသူတွေက အများဆုံး ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Application scope of 1200LPH VAIA1200 Purified Water Filtration System by Viet An
Viet An မှ 1200LPH VAIA1200 ရေစစ်ရဲ့ အပလီကေးရှင်း စကုပ်
VAIA1200's No. 1 purified water purification product in Vietnam is chosen by many hospitals to treat water for dialysis. We all know that dialysis requiresavery high level of water quality, so not all products are usable.
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ် ၁ ဖြစ်တဲ့ VAIA1200 ရေစစ်ကို ဆေးရုံများမှ ကျောက်ကပ်ဆေးဖို့ ရေကို ပြုပြင်ဖို့အတွက် ရွေးချယ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိတဲ့အတိုင်း ကျောက်ကပ်ဆေးဖို့အတွက် ရေက အင်မတန်သန့်ရှင်းနေဖို့ လိုအပ်တယ်။ ပစ္စည်းတွေကို ဖြစ်သလိုသုံးလို့ မရပါဘူး။
Model VAIA1200 is also selected by many production and business establishments of pure bottled and bottled water. Because of its fast water filtration, the quality of the output water meets the standards, the long life is less repair, so the capital recovery time is very fast.
VAIA1200 မော်ဒယ်ကို ရေသန့်ဘူးစီးပွါးရေး လုပ်ငန်းတွေမှ ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ၄င်းရဲ့ လျင်မြန်သော ရေစစ်ခြင်း၊ ရေသန့်က စံချိန်မီခြင်း၊ သက်တမ်းကြာခြင်းတို့ကြောင့် အရင်းငွေကိုလည်း မြန်မြန်ပြန်ရနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
This is also one of the products commonly chosen by people in urban areas to treat purified water for their families. The reason that in the city buys the stainless steel autovalve water filtration system 1200 liters/h than in the countryside because the economic conditions here are better, they are willing to spend some money to buyawater purification product. Genuine ISO 9001:2015 standard to export to foreign countries. In rural areas, they often choose water filtration systems using composite filter columns to save investment costs.
ဒီပစ္စည်းကို မြို့နေလူတွေက မိသားစုသုံးအတွက် ဝယ်ယူကြတယ်။ မြို့နေလူတွေက ကျေးလက်လူတွေထက် တစ်နာရီမှာ ၁၂၀၀ လီတာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စတိန်းလက်စတီး အော်တိုအဆို့စနစ်ကို သုံးထားတဲ့ ဒီစက်ကို ပိုပြီး ဝယ်ယူတဲ့ အကြောင်းအရင်းက မြို့ပေါ်မှာက စီးပွါးရေးအခြေအနေ ကောင်းကြလို့ပါ။ ဒီစက်က စစ်မှန်ပြီး ISO 9001:2015 စံချိန်လည်းမီတာကြောင့် အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်း တင်ပို့လို့ ရပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာက အရင်းအနှီးနည်းတဲ့ စက်သုံးအော်တိုအဆို့ ရေစစ်တွေကို ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Once you have decided to choose this VAIA1200 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
15 20” Filter housing ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 1200LPH VAIA1200 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်